चिनौं हनुमानढोकामा राष्ट्रिय झन्डा फहराएर बस्ने लक्ष्मीनारायण शिल्पकारलाई - जीवनशैली - नेपाल
हनुमानढोका दरबार क्षेत्र छेउछाउ नेपाली राष्ट्रिय झन्डा फहराएर बस्ने लक्ष्मीनारायण शिल्पकार, ५९, लाई पहिलोपटक देख्दा रमाइलो मान्ने धेरै हुन्छन्। तर, हरेक दिनजसो उनको उही दिनचर्या देख्नेको मनमा भने कौतूहल जाग्छ। को हुन् यी व्यक्ति? यसरी झन्डा फहराएर पनि जीवन धानिन्छ? कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पो हुन् कि? झन्डा फहराउनुलाई नै पेसा पो बनाएछन् कि? तर, तानमा बुनिएको नेपाली कपडाको दौरा सुरुवाल, इस्टकोट, भादगाउँले टोपीमा सजिएर चन्द्रसूर्य अंकित झन्डा फरफराउँदै घामपानी, हावाहूरी केही नभनी दिनहुँ सम्पदा क्षेत्रमा देखिने शिल्पकार राष्ट्रिय झन्डा चिनाउन नि:स्वार्थ ढंगले यसो गरिरहेका छन् भन्दा खुसीले गद्गद हुने र आश्चर्यले जिब्रो टोक्ने धेरै हुन्छन्।
भक्तपुरका रैथाने शिल्पकार पेसाले सिकर्मी हुन्। आफ्नै मिहिनेतले काठमाडौँको कालीमाटीमा घर बनाए। छोराछोरी हुर्किसके। छानो र मानोको चिन्ता छैन उनलाई। त्यसैले सानै बेलादेखिको सामाजिक काम गर्ने हुटहुटीलाई उनले अहिले पनि उत्तिकै निरन्तरता दिन पाएका छन्। दुई कक्षा पढ्दाताका टोल–समाजमा कोही बिरामी छन् वा पकाएर खुवाउने कोही छैनन् भने बिहान–बेलुकी नै सघाउन पुग्थे। युवावयमा होस् वा उमेर ढल्कँदै जाँदा, उनको सामाजिक भावनाले निरन्तरता पाइरह्यो। फलत: भक्तपुर रेडक्रसका उपसभापतिसम्म भए। रेडक्रस अन्तर्गतकै दैवी प्रकोप उद्धार समितिका संयोजक भएर पनि काम गरे। यही नि:स्वार्थ सेवाका कारण उनीप्रति त्यसै त्यसै श्रद्धा बढिहाल्छ।
नौला र अरूले नगरेका काम गर्नु शिल्पकारको सोख नै हो। त्यही सोखलाई पूरा गर्ने क्रममा सात–आठ वर्षअघि राष्ट्रिय झन्डासँग उनको साइनो गाँसिन पुगेको हो। यस क्रममा राष्ट्रिय झन्डाको महत्त्वका बारे जानकारी नै नभएका युवादेखि वृद्धवृद्धासम्म धेरैलाई भेटे। कतिले त उनलाई ‘राजाको मान्छे’ र खास दलका कार्यकर्ता भएको आरोपसमेत लगाए। दिमाग सड्किएको भन्दै खिल्ली उडाउनेसमेत प्रशस्तै भेट्छन् उनी। तर, सबैलाई झिँजो नमानीकन विश्वमै पृथक् कहलिएको झन्डाको महिमा र आफ्नो उद्देश्य सुनाउँछन्, यसको आकारप्रकार, चन्द्रसूर्य अनि रंगहरूको अर्थ बुझाउँछन्। भन्छन्, “राष्ट्रिय झन्डा देख्दा गर्वले छाती ढक्क फुलोस्, त्यस बेला यो जाति, समूह, वर्ग वा क्षेत्रको हुँ भन्ने भावना गौण भइदिओस्, एकताको भावना जागृत होस्।”
पहिलोपटक नेपाल आएका पर्यटकसमेत उनलाई खोज्दै आउँदा रहेछन्। यसरी राष्ट्रिय झन्डा फहराएर बस्ने मान्छे आफूहरूले संसारमा विरलै देखेको सुनाउँदा उनी हर्षले गद्गद हुन्छन्। अझ नेपाली युवकयुवतीले ‘हामीले गर्न नसकेको काम तपाईंले गर्दै हुनुहुन्छ’ भनिदिँदा त उनमा खुसीको सीमै हुँदैन। उनी आफ्नो ज्ञान र क्षमताले भ्याएसम्म राष्ट्रलाई विश्वसामु चिनाउन सबैसँग अनुरोध गर्छन्। यही वर्षभित्र हरेक जिल्ला सदरमुकाममा कम्तीमा एक दिन राष्ट्रिय झन्डा फहराउने उद्देश्यका साथ नेपाल भ्रमण गर्ने योजनामा छन् शिल्पकार।
धेरैले सोच्छन्, झन्डा फहराएर बस्नु उनको पेसा हो, कसैले सँगै बसेर फोटो खिचाएबापत पैसा लिन्छन्। तर, उनलाई द्रव्यमोह छैन। कसैकसैले त जबरजस्ती खल्तीमा खाजा खर्च हालिदिन खोज्छन्। उनीहरूलाई शिल्पकार विनम्रतापूर्वक भन्छन्, ‘मन्दिर वरपर बस्ने वृद्धवृद्धा र परेवालाई यो पैसाले भोजन गराइदिनू।’ कोहीचाहिँ मान्दै मान्दैनन्, गोजीमा पैसा हालिदिएरै छाड्छन्। उनी सबै पैसा वृद्धवृद्धा र परेवालाई भोजन गराउनमै खर्चिन्छन्। भन्छन्, “दुई छाक खान पुगेकै छ, पैसा कमाउन यो काम रोजेको पनि होइन।”
प्रकाशित: भाद्र ४, २०७२